🥇 ▷ Xiaomi Redmi 8A waxay yeelan doontaa muuqaal ay dad badani codsadeen ✅
Xiaomi Redmi 8A waxay yeelan doontaa muuqaal ay dad badani codsadeen
Muddo wakhti ah, baytariyada taleefannada gacantu waxay si weyn u kordhiyeen awooddooda. 2500 mAh ee lahaa, tusaale ahaan, batteriga Samsung Galaxy Note ee ugu horreeyay ee arkay iftiinka qorraxda, dib u soo noqoshadii 2011, ilaa 5,000 mAh ee Xiaomi Mi Max 2, isbedel lama huraan ah oo la siiyay markii shaashaddu sii weynaaneyso, qaraar dheeri ah iyo codsiyada ayaa u baahan tamar badan iyo processor si loo shaqeeyo. Waxaas oo dhami waxay u turjumayaan kharash tamar sare oo ay waajib tahay inuu daboolo batteriga weyn haddii aanaan dooneynin inaan ku dallacno taleefanka gacanta maalin walba.
Xiaomi, Redmi 8A, dallaca deg deg ah iyo isku xirka USB Type C
Iyo awoodda weyn ee baytariga, ayay sii weynaan doontaa waqtiga ay ku sii qaadanayso inay ku sii dallacdo mataanaha. Sidaa daraadeed, tikniyoolajiyada bixinta degdegga ah ayaa la soo saaray: Thanks to irbad of amperage weyn waxaan ka heli karnaa xamuul buuxa saacad ama saacad iyo wax yar. Iyada oo aan loo eegin in tikniyoolajiyaddan cusubi ay soo gaabin karto nolosha batteriga (oo ay sidaas tahay, isla markaana tixgalineysa in aan beddeleyno mobilada labadii sanoba mar, waa in aan aragnaa haddii ay u dhigma tahay iyo in kale) waa mid aasaasi ah maaddaama aan ku leenahay marinkeenna . Teknolojiyad, ilaa iyo hadda, ayaa loo habeeyay dhexda iyo xawaaraha sare laakiin taasi, goor dhow, waxay ku soo dhici doontaa garoonka taleefanka gacanta ee 100 Euro.
Hadda, ka dib waqtiga sugitaanka, ugu dambeyntii xaddiga wax soo galintu waxay lahaan doontaa tikniyoolajiyada si dhakhso leh loogu dallaco. Kani waa Xiaomi Redmi 8 A cusub oo lagu soo bandhigi doono 25-ka Sebtember ee soo socota gudaha Hindiya iyo taas, marka loo eego wararka xanta ah ee la aamini karo, waxaad ku raaxeysan kartaa ku dallacsi dhakhso leh adiga oo adeegsanaya isku xirka USB Type-C. Warkaas waxaa faafiyay madaxweyne ku xigeenka adduunka ee astaanta caanka ah ee Shiinaha iyo madaxa fulinta Hindiya, Manu Jain oo lagu daabacay mareegtiisa rasmiga ah ee Twitter.
1aad waligeed quruxsan # Redmi8A! ????
Markii aan dhahnay #Redmi 8A lahaa #Dumdaar muuqaalada, waxaan ula jeednay. Way la imaan doontaa #TypeC deked iyo taageero deg deg ah. ????
Waxay u badan tahay taleefanka KELIYA qaybta qiimaha inuu lahaado nooca-C! ???? RT haddii aad ku faraxsan tahay. ????#Xiaomi ️ # DumdaarRedmi8A pic.twitter.com/ycTGyLvzgk
– #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) Sebtember 23, 2019
Faahfaahinta la shaandheeyay ee Xiaomi Redmi 8A ee cusub
Boostada waxaan ku aragnaa sida uu Manu Jain gacmihiisa ugu haysto waxa, sida muuqata, Xiaomi qeybta cusub ee wax soo gelinta, Redmi A8, oo leh naqshad buluug soo jiidasho leh iyo hal kamarad gadaal ah. Jain laftiisu waa hagaagsan yahay inuu tilmaamo in Redmi A8 cusub uu noqon doono moobiilkii ugu horreeyay ee qiimahiisa lagu daro Iskuxirka nooca C ee USB dib loo celin karo. Labadan astaamood waxay Redmi 8A ka dhigi doonaan mid gaar ah iyadoo lagu dhexjiro heerarka ugu hooseeya qiimaha buugga ‘brand’ ah.
Qaybtan soo-gelinta xero-gelinta ayaa horay loo sifeeyey marar badan kahor. Xaraashka Shiinaha ee TENAA waxaan awoodnay inaan ku aragno nambarkiisa moodel M1908C3KE iyo qeexitaannadiisa qaar oo aan hoos ku liis gareyn doonno.
Haddii aan ku dhejiso sawirka la daabacay, Redmi 8A wuu awoodaa la’aanta qalabka sawirka faraha Waxaan aragnaa gadaal lacag la’aan ah waxaanan la yaabanahay inaan aragno sawirka sawirka faraha faraha shaashadda hoosteeda. Tan macnaheedu waa inaan ku qasban nahay inaan degno wajiga furitaanka kaameerada hore.
Waxay yeelan lahayd shaashad ah 6.21 injis leh dareel biyo ah oo qaab leh, sida midka aan ku haysanno Redmi kale sida note 7.
Gudaha garoonka waxaan ku arki laheyn sideed aalad processor-ka oo ay weheliso xawaare saacad ah oo ah 2.0 GHz oo ay weheliso wax aan ka yarayn 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB Xusuusta gudaha
Kaamirooyinka, gadaal 12 megapixels iyo 8 megapixel selfie.
Kicinta degdega ayaa kuu imaan doonta xitaa rinjiyeyn kara batterigaaga 5,000 mAh
Qiimaha wali lama oga.
Warar kale oo ku saabsan… kala duwanaanta gelinta, Xiaomi